Tenga Apple Tarisa Nike + Series 2 ne81 euros dhisikaundi | Ndinobva mac
Tenga Apple Tarisa Nike + Series 2 ne81 euros dhisikaundi
Uye isu hatisi kutengeswa uye hatisi kutaura nezve chigadzirwa chakadzoserwa kana kugadziriswa. Mune ino kesi isu tiri kutarisana nechinonakidza kwazvo kupihwa kwavanowanikwa muketani yezvitoro isu tese tinoziva kuSpain, hongu, tiri kutaura nezveMedia Markt. Ita kuti zvive pachena kuti vamwe vashandisi vakaratidza kusavimba kwakanyanya muketani yezvitoro zvetekinoroji nekuda kwedambudziko rakaitika kana nyaya dzakasiyana siyana, asi mune ino chiitiko chaicho chose uye chinopesana nemitengo yeApple yepamutemo. Tinogona kusevha ingangoita zana euros kana tikaronga kutenga imwe yeApple Watch Series 100 Nike Edition.
Iyo modhi yatinoona nemutengo uyu ndiyo Apple Tarisa Nike +42mm nzvimbo grey aluminium kesi neNike Volt tambo. Zvimwe zvinotsanangurwa neiyi Apple Watch Ndizvo:
Dual-musimboti S2 processor
Yakabatanidzwa GPS uye GLONASS
Mvura inodzivirira kusvika pamamita makumi mashanu
Kaviri seyakajeka OLED Retina inoratidzira ine Force Kubata (chiuru nits)
Heart rate sensor, accelerometer uye gyroscope
Mutauri uye maikorofoni ine kudzinga kwemvura system
Wi-Fi (802.11b / g / n pa2,4 GHz)
Kusvikira maawa gumi nemana ekuzvimirira maererano naApple
Pasina kupokana, zvinoita kunge chinonakidza chinopihwa kune avo vari kufunga kuita kutenga kweimwe yeaya Apple Watch uye kunyanya iyi Nike Edition modhi. Iyi ndiyo yakananga kutenga chinongedzo pane webhusaiti yeiyo firm uye isu tinogona kusarudza kuitora muchitoro kana kuenda takananga kuchitoro tione kana vaine stock.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tenga Apple Tarisa Nike + Series 2 ne81 euros dhisikaundi
Iwo ari € 51 mutsauko
Zvakanaka, iwo makumi masere nemasere euros.
Kana uchitaura chokwadi, ndakanga ndaona mutengo weiyo 38mm. Chipo chakanaka
Iyo inonyanya kufarirwa yemahara midhiya mapplication maMac
Thimbleweed Park, chiitiko chakajeka senge chekare